Instagram ကြော်ငြာအတွက်အကြိုက်များထပ်မံရယူခြင်း - လိုက်နာရန်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် ၈ Martech Zone
တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 21, 2019 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 14, 2020 Douglas Karr
ယှဉ်ပြိုင်မှုသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အရှိန်မြှင့်တက်လာပြီးအမှတ်တံဆိပ်များသည်သူတို့၏ Instagram ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများမှအကျိုးအပြည့်အဝရယူရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုင်းတာရန်အတွက်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏တန်ဖိုးကို ပို၍ နှစ်သက်လာသည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အကောင့်ရှိသင်၏ကြော်ငြာများအတွက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအကြိမ်အရေအတွက်ကိုတိုးတက်စေမည့်နည်းဗျူဟာများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောသွားပါမည်။
Likes သည် Instagram ပေါ်ရှိမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမဆိုအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများထံမှထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြသသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့သွားနေသည်။ ထိုအရာကလူများကိုသင်၏ရေးသားချက်များကိုနှစ်သက်စေရန်ခဲယဉ်းသည်။ အထူးသဖြင့်သင်ကစတင်သည့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါက။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အတွက်အကြိုက်ဆုံးအရေအတွက်ကိုရရှိရန်ကူညီနိုင်သည့်နည်းလမ်းအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
သင်၏အကောင့်တွင်အကြိုက်ကိုအာမခံနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းမှာအရည်အသွေးမြင့်သောအရာများကိုသင်တင်သောအခါဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်အထူးသဖြင့်ကြော်ငြာများအတွက်မှန်ကန်သည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်သင်၏နောက်လိုက်များထက်လူအများတွေ့မြင်ကြလိမ့်မည်။ အမှတ်တံဆိပ်အများစုသည်သူတို့၏ကြော်ငြာများသည်ခေါင်းများလှည့်ရန်သေချာစေရန်အားစိုက်ထုတ်ကြသည်။ ကောင်းစွာကွပ်မျက်ခံရသောကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကျော်ဖြတ်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ဒီမှာ Instagram ပေါ်ရှိအရည်အသွေးမြင့်ကြော်ငြာအတွက်ဥပမာ
Instagram ၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုမှာ၎င်းသည်စွဲဆောင်ဖွယ်ကောင်းသောပုံပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဖြစ်သော်လည်းသူတို့၏တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုပြသသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စာတန်းများသည်ဒုတိယစက္ကန့်နီးပါးကြာသည်။ အမှတ်တံဆိပ်ကောင်းခြင်းနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသောစာတန်းကောင်းများကိုတွေ့ရှိရသည်။ ထို့အပြင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုသည်သင်၏စာမူ၏ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပုံမလုံလောက်ပါကသင်အကြိုက်များထပ်မံရရှိရန်ပြန်လည်ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ က မှတ်မိလွယ်တဲ့စာတန်း ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည့်နောက်လိုက်များကိုမှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်။
၃။ CTAs နှင့် Hashtag များကိုပညာရှိစွာအသုံးပြုပါ
Hashtags နှင့် CTAs (action to ခေါ်) သည်လူများအားထိတွေ့ဆက်ဆံစေခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုပါကအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ Hashtags များသည်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် Instagram စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမဟာဗျူဟာ။ သင့်အနီးအနားရှိလူများထံသို့သင်၏ကြော်ငြာကိုရယူရန်သင်၏ Instagram ကြော်ငြာအတွက် local hashtags ကိုသုံးပါ။ ဒါ့အပြင်သင်နိုင်ဘူး လူကြိုက်များ hashtags မှာကြည့်ပါ သင့်အကောင့်အတွက်နောက်လိုက်များထပ်မံရရှိရန်သင်၏နယ်ပယ်တွင်။
သင်၏ Instagram အကောင့်တွင်အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်လုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရန်လူများကိုအတင်းအကျပ်စေခိုင်းလေ့ရှိသည်။ CTA များသည်ဆက်စပ်နေပြီး၎င်းတို့ကိုမည်သည့်နေရာတွင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သူတို့တန်ဖိုးထားသောတန်ဖိုးတစ်ခုခုရှိလျှင်လူများသည် CTA ကိုသာလက်ခံလိမ့်မည်။ CTAs ကိုအသုံးပြုသောအခါအရေးတကြီးသဘောထားကိုဖန်တီးခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြိုက်တယ် Phrases ပိုပြီးထွက်ရှာတွေ့မှယခုကိုနှိပ်ပါ, ကန့်သတ်အချိန်သာရရှိနိုင်ပါသည် လူတွေကိုနှိပ်ဖို့အတွက်ဥပမာကောင်းတွေ။
၄။ အကောင်းဆုံး Posting Times ကိုရှာပါ
သင်၏အကောင့်နှင့်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံရန်ဆွဲဆောင်ရမည့်အရေးကြီးသောကဏ္ aspect တစ်ခုမှာသင်၏ကြော်ငြာများသည်သင်၏နောက်လိုက်များအတက်ကြွဆုံးအချိန်နှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ Instagram တွင်“ တင်ရန်အချိန်မှန်” မည်သူမျှမရှိပါ - ၎င်းသည်စီးပွားရေးအမျိုးအစားနှင့်ပစ်မှတ်တည်နေရာနှင့်ကွဲပြားသည်။ သူကဆိုပါတယ်, စားသုံးသူကိုဆွဲဆောင်ဖို့လက်မယေဘုယျစည်းမျဉ်းစဉ်အတွင်း post ရန်ဖြစ်ပါသည် အလုပ်ချိန်များ နေ့လည်စာစားချိန်ကဲ့သို့11: 00 မှ 1 နံနက်: 00 ညနေ) သို့မဟုတ်အလုပ်ပြီးနောက် (7: 00 မှ9ညနေ: 00 ညနေ) ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်ပစ်မှတ်ထားသောနေရာကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ Instagram မှတင်ရန်အချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များလည်းပါရှိသည် HubSpot သငျသညျအထဲကစစျဆေးနိုငျသညျ။
5. Cross-platform မြှင့်တင်ရေး
Instagram သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော platform တစ်ခုဖြစ်သော Cross-platform posting ကိုအထောက်အကူပြုသည် သင်၏စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ပါ အပေါ်။ သင်၏ Instagram feed ကို Facebook နှင့် Twitter ကဲ့သို့သောအခြား platform များမှအသစ်ပြောင်းခြင်းများအတွက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်သင်ပြိုင်ပွဲများကျင်းပသည့်အခါသင့်မျက်နှာသာရစေနိုင်သည်။ လူတွေကအနိုင်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုနှစ်သက်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်တခြားလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာပြောတာကသင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်ကူညီနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တော်တော်များများကသူတို့ရဲ့ဇီဝဗေဒမှာ URL ကိုအသုံးပြုပြီးသင်ကသူတို့ကိုအခြား URLs များသို့လမ်းညွှန်နိုင်မည့်သူတို့၏ Facebook စာမျက်နှာကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်။
6. Like နှင့်ဆက်စပ် Niches အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်
ဆက်နွယ်သည့်အကောင့်များနှင့်စိတ် ၀ င်စားမှုကိုတူညီသောနယ်ပယ်တစ်ခုတွင်သင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ၎င်းတို့အကောင့်တွင်၎င်းတို့နှင့်အချိန်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု - Instagram သည်ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းပေါ်တွင်အမြဲအလုပ်လုပ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကသူတို့အကောင့်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တဲ့အခါ၊ သူတို့နဲ့ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုဆွဲဆောင်ဖို့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးလာနေပါတယ်။ သင်၏အကောင့်ကိုနောက်လိုက်များပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာစေရန်လည်းရနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာရေရှည်တွင်သင်၏အကောင့်ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။
၇။ Instagram Engagement Pod ကိုဆက်သွယ်ပါ
သီးတောင့်သည် Instagram ပေါ်ရှိနယ်ပယ်တစ်ခုတည်းတွင်ရှိပြီးသူတို့၏နောက်လိုက်များ၊ အကြိုက်များသို့မဟုတ်အမြင်များကိုကြီးထွားစေလိုသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုအကြားတိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုဖြစ်သည်။ သီးတောင့်တစ်ခု၏အခြေခံအကျဆုံးအချက်မှာပုဂံအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး သည်အကြောင်းအရာအသစ်များတင်သည့်အခါတိုင်း၊ သီးတောင့်ရှိလူများက၎င်းနှင့်ထိတွေ့ရန်မျှော်လင့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါက post ကိုသူတို့ရဲ့နောက်လိုက် feeds ရဲ့ထိပ်ကိုရောက်အောင်ကူညီပေးတယ်။ လူတွေက Instagram ဟာသူတို့ရဲ့ algorithm ကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ပြီးကတည်းကသီးတောင့်ကိုသုံးနေကြတယ်။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်သက္ကရာဇ်စဉ်အရထက်လူကြိုက်များမှုနှင့်အညီဖော်ပြပေးသည်။
သင်၏ကြော်ငြာအတွက်ကြိုက်နှစ်သက်ရာရရန်သဘာဝကျသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာအကြောင်းအရာ၏အရည်အသွေးကိုအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကြော်ငြာများတွင်၎င်းတို့တွင်အရည်အချင်းအလုံအလောက်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်ကျန်အကြောင်းအရာများမှထင်ရှားလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်ပရိတ်သတ်၏အာရုံကိုဖမ်းယူရန်ဖန်တီးမှုနှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်ကဤအမှုကိုပြုပုံ၏ဥပမာတစ်ခု -
Starbucks တစ် ဦး ရှိခဲ့ပါတယ် #FrappuccinoHappyHour ဗိုင်းရပ်စ်သွားလေ၏သောကင်ပိန်း။ သူတို့နောက်လိုက်များနှစ်သက်သောထူးခြားသည့်အရာတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်တောက်ပသောအရောင်များနှင့်နောက်ခံဖန်တီးမှုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြီးမြောက်စေသည်။
Wrapping Up - လူတိုင်းဟာ Instagram ကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်
နောက်ဆက်တွဲအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် Instagram ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသံသယမရှိဘဲ Instagram အကြိုက်သည်လူများအားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ကြော်ငြာများအပေါ်ငွေအမြောက်အမြားသုံးစွဲလေ့ရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းတို့အားအလုပ်မလုပ်နိုင်ပေ။
ကြော်ငြာများအတွက် ပို၍ နှစ်သက်ခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းကိုမှန်ကန်စေရန်သေချာစေရန်သင်အနည်းငယ်သောအချက်များထက်သာအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ သင့်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုတုန့်ပြန်စေချင်ရင်အချိန်ကုန်တာ၊ ရုပ်ပုံအရည်အသွေး၊ စာတန်းများစတာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်မရှိမဖြစ်အရာတွေဖြစ်တယ်။ ဤအကြံပြုချက်များသည်သင်၏ Instagram ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများတွင်မည်သို့အကျိုးအရှိဆုံးနည်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များပေးသင့်သည်။ ပိုကောင်းသောရလဒ်များရရန်သင်၏ကြော်ငြာနည်းဗျူဟာကိုမည်သို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်ကိုမျှဝေပါ။